Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: သို့ ဦးလွန်း၊ စွေစောင်းနေသော တတိယ မျက်လုံးအား ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်း..
သို့ ဦးလွန်း၊ စွေစောင်းနေသော တတိယ မျက်လုံးအား ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်း..
by James Mmt on Thursday, 21 June 2012 at 22:38 ·
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် မိမိကိုယ်ကို မိမိ ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်နေသော ရခိုင်လူမျိုးများ ရှိနေသည် ဆိုသည့်စကားမှာပင် ရိုဟင်ဂျာအား လော်ဘီလုပ်ချင်သည်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်….. အဆိုပါ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောနယ် တစ်ဝိုက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ၎င်းတို့ကို ရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့ ခေါ်တွင်မှန်း သေခြာ မသိကြပါဘူး….. ဦးလွန်း ဘယ်အချိန်က တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ် မသိပေမယ့် ကျွန်တော် ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ၀န်းကျင်တွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘင်္ဂါလီလို့သာ သုံးနှုန်းပါတယ်…..
ထပ်မံပြီး ဦးလွန်းရေးသားလာရာမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ သုံးတဲ့စကားဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဘင်္ဂါလီ စကားနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အလုံးစုံမတူပါလို့ ပြောပါတယ်…. ဒေသခံ ရခိုင်တွေသော်မှ ဘင်္ဂါလီ စကားကို ကွဲကွဲပြားပြား မခွဲခြားတတ်တာကို ဦးလွန်း နားလည်တာသည် စဉ်းစားစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်…. ထပ်မံပီး ဦးလွန်းမှာ ရောချလာတာသည် ရခိုင်စကားနှင့် ဗမာစကား ကွဲပြားသကဲ့သို့ ဘင်္ဂါလီ စကားနှင့် ရိုဟင်ဂျာစကား ကွဲပြားတဲ့အတွက် ဘင်္ဂါလီနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို လူမျိုး နှစ်မျိုးလို့ သတ်မှတ်နိုင်သည်လို့ ဆိုလာပါတယ်…..
ဒီနေရာမှာ လူမျိုး တစ်မျိုးဆိုတာ အလွယ်တစ်ကူ သတ်မှတ်လို့ ရသလား မေးစရာ ရှိလာပါတယ်…. လူမျိုးတစ်မျိုးတိုင်းမှာ ၎င်းလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ သမိုင်း၊ ဂီတ၊ ဓလေ့ထုံးစံ ရှိရပါတယ်….. ရိုဟင်ဂျာလို့ နာမည်ခံလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများ၏ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ဂီတ၊ ဓလေ့ထုံးစံဟာ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း ဖြစ်နေတာ ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး….. အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုသည်ကား သမိုင်း ဖြစ်ပါတယ်….. ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ သမိုင်းကို ၎င်းတို့ အထင်ကရများဖြစ်ကြသော နူရူးအစ္စလာမ်နဲ့ ဒေါက်တာ ၀ါကာအူဒင်တို့ နှစ်ယောက် ပြောတာမှာတင် နှစ်မျိုးထွက်နေသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိသာနိုင်ပါတယ်….
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမ စစ်ပွဲအပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ စတင် ၀င်ရောက်လာတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရက ဆိုသည်လို့ ဦးလွန်းက ရေးလာပြန်ပါတယ်…. လက်ရှိ အစိုးရသာမက၊ ယခင် စစ်အစိုးရနှင့် ၎င်းဘိုးအေ ဦးနေ၀င်းအစိုးရ လက်ထက်မှာပါ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာကို လက်မခံခဲ့တာ အထင်အရှားဖြစ်ပါတယ်…. ရိုဟင်ဂျာများဟာ ရခိုင်ဘုရင်များ လက်ထက်ကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို ရောက်ရှိနေတယ် ဆိုပီး ရန်းတုတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်…
Drawn & Engraved by Charles Thomson Edin for "Constables, Miscellany" 23rd June 1827
အဲ့ဒိဟာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရိုဟင်ဂျာ လော်ဘီသမား အများစုကို မေးနေကြ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာပြည်ကို စာရွက်စာတန်းနဲ့ စနစ်တကျ အုပ်ချုပ်သွားတာမှာ ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် စကားလုံး ပါဝင်ခြင်းမရှိလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. သူတို့ မဖြေနိုင်ကြပါဘူး…. ဘာ့ကြောင့်လဲ အဖြေကရှင်းပါတယ် အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိခဲ့လို့ပါပဲ….. တစ်ချိန်က ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က ရှေ့နေလိုက်တဲ့လူတွေ ထုတ်ဖော်ပြောလာတဲ့ Encyclopaedia of the South-East Asian Ethnography စာအုပ်မှာပင် ရိုဟင်ဂျာ (Rohingya) လို့သုံးမထားပဲ (Rohinga) အနေနဲ့သာ သုံးနှုံးထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
လက်ရှိ ရှိနေသော ဘင်္ဂါလီများကို အမှီပြုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဘင်္ဂါလီများ မကြာခဏ ခိုးဝင်နေသည် ဆိုပီးတော့ ရောချလာတာကို တွေ့ရပါတယ်…. ဒီနေရာမှာ သမိုင်းကို လိမ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အတွက် အလိမ်တွေသာ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ဖြစ်နေသလို ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နဂိုကတည်းကပင် တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာမရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်လာစေပါတယ်… အထူးသဖြင့် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူများကို အကာအကွယ် ပေးခဲ့တာကို တစ်နည်းအားဖြင့် ၀န်ခံလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးဖြင့် သန့်စင်ရှင်းလင်းခဲ့သည် ဆိုရာတွင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြန်လည် လက်ခံရသည်ကို ထောက်ပြပီး နိုင်ငံသားအဖြစ် တနည်းတစ်ဖုံ အသိအမှတ်ပြုထားရသည်ဟု လိုရာဆွဲတွေး ရေးသားထားပါတယ်…. (မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြန်လည် လက်ခံရသည်ကိုမူ ဦးနေ၀င်း အစိုးရမှ ယခုထက်တိုင် ရှိနေသော တစည ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တရားဝင်ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပေးမည်ဆိုလျင် ပိုမိုကောင်းမွန်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။)
ထပ်မံ၍ စာရေးသူမှ စစ်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘ၀ဟာ သနားစဖွယ် ရေးသားလာပါတယ်…. စစ်အစိုးရ တက်လာပီးနောက်ပိုင်း သနားစဖွယ် ဘ၀များ ဖြစ်သွားကြတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင်မွဲ၊ တိုင်းပြည်ရှိသမျှ သယံဇာတ လက်ညှိုးထိုးရောင်းစား၊ ငါ့ဘို့တစ်ခုထဲသာ ကြည့်ခဲ့ကြသူတွေကြောင့် ပြည်သူအများစု ဒုက္ခပင်လယ် ဝေခဲ့ရတာကို ဦးလွန်းဟာ လျစ်လျူရှုပြီး ရိုဟင်ဂျာများကိုသာ သနားနေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦးလွန်း ဘယ်လဲ ဘာလဲ ခန့်မှန်းလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
ရိုဟင်ဂျာများဟာ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်မရှိဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်…. ဘာ့ကြောင့်လဲ အဖြေက ရှင်းပါတယ် နိုင်ငံသား မဖြစ်သူများကို မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် မပေးပါဘူး…. အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ထိုက်သည် မဖြစ်ထိုက်သည် အငြင်းပွားနေသည့် လူမျိုးစုတစ်ခုမှ လူများ၊ အထူးသဖြင့် တဖက်နိုင်ငံမှ ရောင်တော်ပြန်ဝင်လာမည့် လူများအား ကာဗာပေးမည့် လူမျိုးများဖြစ်နေသဖြင့် ပိုမိုသတိထားနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာလျော့လျဲမှု၊ လာဘ်စားမှုများကြောင့် ဟာကွက်ဖြစ်နေတာကို အသုံးချလာတာကို ဗိုလ်မှူးလှမြိုင်ရေးတဲ့ ဘင်္ဂါလီများရဲ့ ဖားခုန်စနစ်နဲ့ ၀င်လာပီး အာမက်နေရာမှာ အာမက်၊ မူလာ နေရာမှာ မူလာနဲ့ ခပ်တည်တည် အစားထိုးဝင်လာခြင်း ဆိုတာတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်… အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်း ရှိတဲ့အတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်ထားရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူနေမှု ဘ၀မှာ ဆိုးရွားခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်….. ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာရှိသော ဘင်္ဂါလီ သူဌေးများအိမ်ကို ဦးလွန်း မေ့နေဟန် တူပါတယ်….
ဘင်္ဂါလီများဟာ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လျင် အာရေဗျီဘာသာစကား သင်ကြားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ သားများအား အာရပ်နိုင်ငံများတွင် အလုပ်သွားလုပ်စေရန်သာ အားထားပျိုးထောင်လေ့ ရှိပါတယ်…. အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများ အပါအ၀င် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ အာရပ်နိုင်ငံများသို့ တရားမ၀င် သွားရောက်သူများအား လူကုန်ကူးသည့် အစီရင်ခံစာများတွင်လည်း အထက်ပါ အချက်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်…. ဘူးသီးတောင် မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီများသည် ၎င်းတို့သားများအား အာရပ်နိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်ရာတွင် ပထမ တစ်ဦးအား စေလွှတ်ပြီး ၎င်း၏ ညီနောင်သားခြင်းအား ခေါ်စေပါတယ်…. အဆိုပါ ဖားခုန်စနစ်နဲ့ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ခေါ်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှ သားယောက်ျားလေး ၁၀ ယောက်ခန့် အာရပ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သွားလုပ်၍ တစ်လလျှင် သားယောက်ျားလေး တစ်ယောက်မှ ၁ သိန်းပို့ပေးရုံမျှနှင့် တစ်လ၀င်ငွေ ၁၀ သိန်းခန့်ရှိသည့် ကြေးရတက် တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်…. သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဘူးသီးတောင် မောင်းတော တ၀ိုက်ရှိ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဟာ ကလေးများများ မွေးရန် အားထုတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်….
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအား တားမြစ်သည်ဆိုရာတွင် မိန်းမအား အတားအဆီးမရှိ ယူခြင်း၊ ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးစံအရ အမျိုးသမီးမှ အစော်ကားခံရသည်ကို အပြစ်သင့်ခြင်း အစရှိသည့် အားသာချက်များကြောင့် ဘင်္ဂါလီတို့ အိမ်ထောင်တစ်စုလျင် ကလေး အယောက် ၂၀ နှင့်အထက် ရှိနေသဖြင့် တားမြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်ပင် တစ်ခါယူလျင် မိန်းမတစ်ယောက်သာ ယူရသည့် တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်….
တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ကလေး အယောက် ၂၀ ခန့် ရှိကြသဖြင့် ကျောင်ထားရန် မဆိုထားနှင့် စားရန် သောက်ရန်ပင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်ကြရပါတယ်….. မှီခိုသည့် သားသမီး အရည်အတွက် များလျင် အဆိုပါမိသားစု ဆင်းရဲတွင်းမှ မတက်နိုင်ခြင်းမှာ သူ့သဘာဝ ဖြစ်သော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း အစိုးရကို အပြစ်ဖို့လာတာ တွေ့ရပါတယ်… အချို့သော ငွေကြေး ချောင်လည်သည့် ဘင်္ဂါလီ များမှ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေသည့် ဘင်္ဂါလီများမှ လူငယ် ယောက်ျားလေးများအား အိမ်တွင် အခိုင်းအစေသဖွယ် ခေါ်ထား၍ ကျောင်းထားပေးခြင်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်…. ကျောင်းထားသည် ဆိုရာတွင်လည်း ရေးတတ် ဖတ်တတ်ရုံမျှသာ ထားပေးပြီး အချိန်တန်လျှင် အာရဗျီဘာသာကိုသာ ဆက်လက် သင်ကြားခိုင်းပါတယ်…. ထိုသို့ အိမ်တွင် ခိုင်းစေရန် ခေါ်ထားသည့် ကောင်လေးများမှ လူငယ်ပီပီ လိင်စိတ် မထိမ်းနိုင်ပဲ သောင်းကြမ်းသဖြင့် လူမှုရေး အရှုပ်အရှင်းများ ဖြစ်သဖြင့် အမှုဖွင့် တိုင်ကြား၍ အရေးယူခံထားရသူများ နစက စခန်းမှာ မကြာခဏပါပဲ….. (နစက များရဲ့ ပွဲတော်ကြီးဆိုလည်း မမှားပါဘူး….)
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများမှာ သန္ဓေတားလျင် ဘာသာရေးအရ အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံယူထားသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများထက် လူဦးရေ များပြားသည်ဟု မိုးကြိုးပစ်ရာ ထန်းလက် ကာထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…. အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုရှိ ယောက်ျား တစ်ယောက်တွင် အနည်းဆုံး မိန်းမ ၄ ယောက်ခန့် ရှိပြီး မိန်းမ ၁ ယောက်လျင် အနည်းဆုံး ကလေး ၅ ယောက်နှင့် အထက် မွေးဖွားကြပါတယ်….. အဆိုပါဒေသရှိ ဖွားသေ ကိန်းဂဏန်းများကို UNDP/INDP အပါအ၀င် INGO တွေရဲ့ စာရင်းတွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…. အချို့အိမ်ထောင်စုများတွင် မိန်းမ၏အမေ ယောက္ခမပါ သားမက်အိမ်မှာ လိုက်နေ၍ ဗိုက်ကြီးပြီး ကလေးပြန်မွေးသည့် အဖြစ်အပျက်များလည်း ရှိပါတယ်…. မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသည်မှာ သား၏ မိန်းမအား အဖေမှ မတရားပြုကျင့်သဖြင့် သားဖြစ်သူမှ မကျေနပ်၍ အဖေ၏ မယားထဲမှ တစ်ယောက်အား ပြန်လည် ပြုကျင့်ကြရင်း အခြင်းခြင်း အဝေမတည့် ဖြစ်၍ နစက ရုံးသို့ အပြန်အလှန် တရားစွဲရန် ရောက်လာတဲ့ အမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ အလွန့်ကို ပေါများတာကို အဆိုပါ ဒေသကို ရောက်ဖူးသူတိုင်း သိရှိကြပါတယ်… မြေယာအသစ် ဖော်ထုတ်ခွင့် မရှိဟု ဆိုပါက ဘင်္ဂါလီ ရွာငယ်လေးမှ ရွာကြီးများ ဖြစ်လာသည်မှာ မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်သည်မသိဟု ဦးလွန်း ပြောချင်သလား မသိပါ…. ဘင်္ဂါလီများ မြန်မာပြည်သို့ ၀င်လာခြင်းမှာ ဘာသာရေး ဆရာများ၏ သွေးထိုး မြှောက်ပင့်မှုနှင့် နယ်မြေအပိုင်လိုခြင်း၊ အစ္စလာမ်မစ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် စသည့် ရည်မှန်းချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့်နာမည်ဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူသည့်အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများပင် ၎င်းတို့ကိုယ် ၎င်းတို့ ရိုဟင်ဂျာဟုပင် လိမ်ညာကာ သွားရောက်သည့် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်…. ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်မှ လာသည်ဟုသာ ပြောသော်လည်း မြန်မာစကား တစ်လုံးမျှ မတတ်သူ ပေါများလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ လူကုန်ထံ မြန်မာမွတ်စလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အချို့သော လူများဟာ အင်္ဂလန်ကဲ့သို့သော အနောက်နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်လိုသည့်အခါ ၎င်းတို့မှ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်သည်ဟု လိမ်လည် ဖော်ပြ၍ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ခိုလှုံရန် ကြိုးစားကြခြင်းများလည်း ရှိကြပါတယ်….
ဦးလွန်းမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများဟာ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးများ လုပ်ကိုင်နေကြသည်မှာ ယုတ္တိမတန်ပါဟု ရေးသားထားပြီး မူးယစ်ရာဇာ အများစုမှာ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြောင်း စွတ်စွဲထားပြန်ပါတယ်…. အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း မှန်သမျှ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ကင်းရှင်းသည့်အဖွဲ့ဟု၍ မရှိသလောက် နည်းပါးပါတယ်…. အထူးသဖြင့် လိုအပ်သည့် လက်နက် ခဲယမ်းများ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ငွေကြေး အလျင်မြန်ဆုံး ရရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးသာ ဖြစ်ပါတယ်…. ထို့အတွက် အိုစမာနှင့် မူလာအိုမာတို့ အာဖဂန်မှာ ဘိန်းအကြီးအကျယ် စိုက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…
လက်ရှိတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပင်လျင် ၎င်းနိုင်ငံရေး အခြေမှာ ယဲ့ယဲ့ပင် ဖြစ်ပါသည်…. ပြည်တွင်းတွင် နိုင်ငံအား အာဏာသိမ်းရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြံစည်နေသည့် အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်များ လက်မှ မနည်းရုန်းထွက်နေစဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်… လူဦးရေဗုံး ပေါက်ကွဲလု ဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အနေနဲ့လည်း ရောက်လေရာ ပြဿနာရှာသည် အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများအား သူ့နိုင်ငံတွင် ဆက်ထားရန် ငြင်းဆန်လိုသည်မှာ အသေအခြာပင် ဖြစ်ပါတယ်…..
တစ်ဖန် ဦးလွန်းမှ ရိုဟင်ဂျာများအား ပညာမတတ် စီးပွားရေးမရှိ အရိုင်းအစိုင်းများဖြစ်အောင် မလုပ်ရန်ဆိုပီး ချိမ်းခြောက်တဲ့ပုံစံ ရေးသားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်…. ဘူးသီးတောင် မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီများဟာ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လျင် အာရဗျီဘာသာကိုသာ အလေးပေး သင်ကြားလိုသည်ကိုတော့ ဦးလွန်းဟာ ထည့်သွင်း ရေးသားထားခြင်း မရှိပါဘူး…. တဖန် ဘာသာတရားနှင့် ကိုင်ပေါက်၍ ရန်ကိုရန်နှင့်ရှင်းလျှင် မအောင်မြင်နိုင်ဟု ဘုရားဟောထားသည်ကို သုံးစွဲလာပါတယ်….
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် လောကီနှင့် လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာရှိပါတယ်…. လောကီဘ၀တွင် ကျင်လည်လျှင် လိုက်နာရန်နှင့် လောကုတ္တရာ လမ်းစဉ်သို့ လျှောက်လှမ်းရာတွင် ကျင့်သုံးရန် လမ်းစဉ်နှစ်ခုကို ခွဲခြားထားပါတယ်…. လမ်းစဉ်နှစ်ခုကို ခွဲခြားထားသော်လည်း လောကုတ္တရာလမ်းသာ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းလို့လည်း ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်….. လောကုတ္တရာကို မလိုက်နိုင်၍ လောကီလမ်းမှ လျှောက်လှမ်းနေသူများ အဆင်ပြေစေရန် လောကီဘ၀မှာ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းများကို ပြဋ္ဌာန်းထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…. သို့ဖြစ်သောကြောင့် လောကုတ္တရာ လမ်းစဉ်တွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအား လောကီလူသားများကို လိုက်နာခိုင်းနေသည်မှာ မည်သို့မျှ သင့်လျော်ခြင်း မရှိပါ……
ပိုမို ဆိုးရွားသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား သည်းခံရန်၊ ရောင့်ရဲရန် တွန်းအားပေးနေသည့် စာရေးသူ အများစု၏ အခြားမျက်နှာတစ်ဖက်တွင် မိမိနှင့် ဘာသာတူသည့် လူများအား မြှောက်ပင့်နေသည်ကို တွေ့ရများပါတယ်…. အထူးသဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အားနာခြင်း၊ သည်းခံခြင်း ရောင့်ရဲခြင်းကို အခွင့်အရေးယူရန် ဖြစ်ပါတယ်…. ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပါသည် ဆိုသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်ပင် မိမိနိုင်ငံအား ထိပါးလာသည့်အခါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ ဒုတိယဦးစားပေး ဖြစ်သွားရပါတယ်…. ဦးလွန်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ ဘင်္ဂါလီများအား ပင်လယ်အတွင်း ထွက်မပြေးစေပဲ အားပေး ကူညီရန် တိုက်တွန်းနေပါတယ်….. ယခုလက်ရှိတွင်ပင် ၎င်းတို့အပေါ် စေတနာထားသည့် ဆရာဝန်၊ ကျောင်းဆရာများပင်မချန် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နေသည့် အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီတို့ လုပ်ရပ်ကို တစ်ခုမျှ ရေးသားထားခြင်း မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်…. ယခုတွင်ပင် ၀န်ထမ်းကဒ်အား အကြောင်းပြ၍ စစ်တွေမြို့တွင်း ၀င်လာပြီး မိမိအိမ်အား မီးရှို့၍ ရခိုင်ရပ်ကွက်အား မီးလောင်ရန် ကြိုးစားသည့် ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီး၏ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်လျင်လည်း သိနိုင်ပါတယ်….
ထပ်မံ၍ ဦးလွန်းမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့် ပြည်တွင်းရှိ မွတ်စလင်များ အရေးကိုလည်း ရောနှော သွေးထိုးလာပါသည်…. ပြည်တွင်းတွင် နဂို အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်သည့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနှင့် ဘင်္ဂါလီများ ၀င်ရောက်လာခြင်းကြောင့် နောက်တိုးလာသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဟူ၍ နှစ်မျိုး ကွဲပြားပါတယ်….. မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် အခြားလူမျိုးများအား ဘာသာတရားကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ပဲ လုပ်ရပ်ကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ရက်ရက်စက်စက် မှုခင်းများတွင် ကျူးလွန်သည့် တရားခံများမှာ အဆိုပါ ဘာသာဝင်များ ဖြစ်နေသည့်အတွက် အမြင်စောင်းခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဦးလွန်းမှ အရေးကြီးသည်မှာ နိုင်ငံချစ်စိတ်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလာပါတယ်…. ဟုတ်ပါတယ် နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးမှ နိုင်ငံသားအဖြစ် ယုံကြည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးသလား…… ဟုတ်ကဲ့ အဖြေများက တပုံတပင်ပါ…. ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ဖားခုန်စနစ်နဲ့ မိသားစုလိုက် ရွှေ့လာကြပီး နောက် ထပ်ရွှေ့လာသူတွေကို အကာအကွယ် ပေးပါတယ်…. ဘင်္ဂလား မြန်မာ ရေပိုင်နက် ပြဿနာတက်တော့လည်း နှုတ်ပိတ်နေကြပီး ကုလက ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ချက်ခြင်း ၀မ်းမြောက်ကြောင်း သ၀ဏ်လွှာ လှမ်းပို့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်က သက်သေပြနေပါတယ်….. သို့ဖြစ်သည့်အတွက် Action များစွာ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် မယုံကြည်သည့် Reaction ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဦးလွန်းကိုးကားလာသည့် လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတန်းအရ ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားလာလျင် ၎င်းတွင် နိုင်ငံရှိရမည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက ဤအချက်ကို လက်မခံလိုကြပေလို့ သိမ်းကြုံး စော်ကားထားပြန်ပါတယ်….. ယခုလက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနယ်စပ်ကြားမှာ နိုင်ငံပျောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အများစု ရှိကြပါတယ်…. ၎င်းတို့နဲ့ ပါတ်သက်လို့ မည်သည့်မီဒီယာမျှ ဘင်္ဂါလီအရေးလောက် တလေးတစား ထုတ်လွှင့်နေခြင်း မရှိတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကိုယ်၌ပင်လျင် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘ၀တွေ ထုနဲ့ဒေးပါ ဦးလွန်း မျက်လုံးကို သေခြာ ဖွင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်….
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ဦးလွန်းရေးသားသလို မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ လူလူခြင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ နေထိုင်တယ်၊ မေတ္တာတရား ကရုဏာတရား ရှေ့ထားပြီး လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားပဲ အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်လာခဲ့တာ ရှေးကနေ ယနေ့အထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. မိမိအပေါ် ကောင်းမွန်လျှင် မိမိဘက်မှ ပြန်လည် ပေးဆပ်ရန် ၀န်မလေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ စုစည်းထားတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါတယ်….. ဦးလွန်းပြောသလိုပဲ ချောင်ပိတ်ရိုက်သည့် ခွေးပင်လျှင် ပြန်လည် ကိုက်တတ်သည်ဟု ဆိုထားသကဲ့သို့ အေးချမ်း၍ မေတ္တာတရားနှင့် နေထိုင်သည့် လူမျိုးများဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်အား ထိပါးလာလျင်မူ ကာကွယ်ရန်မှာ လူမျိုးတိုင်း၏ ပင်ကိုယ် အသိတရားပင် ဖြစ်ပါတယ်…..
ဦးလွန်း၏ ယခုလုပ်ရပ်၊ ယခုရေးသားသည့်စာမှာ အကြမ်းဖက်သူအား ဖြောင်းဖြခြင်းမပြုပဲ အကြမ်းဖက်ခံရသူအားသာ ငြိမ်ခံနေရန် ပြောကြားနေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်ဝါဒအား အားပေးသည့်သဘော သက်ရောက်နေပါတယ်….. သို့ဖြစ်သည့်အတွက် ပင်ကိုယ်ကပင် ယဉ်ကျေး၍ လူတစ်ဖက်သားအား ရန်မစတတ်သည့် မြန်မာလူမျိုးများအား သည်းခံရန် ပြောကြားနေသည်ထက် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှလွဲ၍ ကျန်သည့် လူမျိုးစုများအား ကလေးသူငယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ မိမိအား ဆေးကုပေးသည့် ဆရာဝန်၊ မိမိအား စာသင်ပေးသည့် ကျောင်းဆရာမချန် အကုန်လုံးအား ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်နေသည့် ဘင်္ဂါလီများအား သွားရောက် ဖြောင့်ဖျရန် လိုအပ်နေသည်ဟု အကြံပေးလိုပါသည်…… စေတနာ မှန်လျှင် မဖြစ်နိုင်စရာ မရှိပါ….. အမှန်ကိုမြင်နိုင်ပါစေလို့ ခင်ဗျားရဲ့ မျက်နှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ နှလုံးသားကို ပြောချင်ပါတယ်…..
မှတ်ချက် ။ ။ ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ ဘာလဲဆိုတာကို ပေါ်တင် ထုတ်ဖော် မရေးချင်ပါဘူး…. ခင်ဗျားခြေလှမ်း ဘာဆိုတာကိုလည်း မပြောချင်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားလုပ်ရပ်က အစ ဆွဲထုတ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အစပေါင်းမြောက်များစွာ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူး….. မှန်သူနဲ့ မှားသူမှာ မှားသူကို မတားပဲ မှန်သူကို ငြိမ်ခံနေဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးကို လုံးဝ လက်မခံပါဘူး.......
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတို့ စွတ်ကြောင်း ဆိုတဲ့စာတစ်ပုဒ် ဆက်ရေးဖြစ်ပါဦးမယ်…..
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 17:57
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: သို့ ဦးလွန်း၊ စွေစောင်းနေသော တတိယ မျက်လုံးအား ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးခြင်း.. . All Rights Reserved